Iftin Bank oo dhisme casri ah ka daahfurtay magaalada Garoowe. – Radio Daljir
Iftin Bank oo dhisme casri ah ka daahfurtay magaalada Garoowe.
Luulyo 27, 2016 6:13 b 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 27-July-2016 caasimadda Puntland ee Garoowe kaga qayb galay Munaasabad lagu daahfurayey dhisme cusub oo uu Bangiga Iftin ka hirgeliyey magaalada Garoowe.
Munaasabadd ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiiro, Xildhibaano, maamulka Bangiga Iftin, Ganacsato iyo Qurbe Joog ka kala timi daafaha Caalamka, kuwaas oo dalka ugu soo laabtay sidii ay u maal-gashan lahaayeen.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo xadhigga ka jaray dhismahaan cusub ayaa ku ammaanay maamulka Bangiga Iftiin horumarka uu kusoo kordhiyey Puntland maadaama oo uu keenay adeegyo ay shacabka Puntland ku taamayeen.
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Bangigaani uu shaqooyin u abuuri karo dhalinyarada wax baratay ee reer Puntland kadibna uu shaqo abuurkaasi sababi doono dhaqaale badan oo waddanka soo gala iyo cashuur badan oo dawladda usoo xeroota si ay dawladdu usii dar-dargeliso adeegyada ay bulshada u suubiso.
Madaxweynaha ayaa maamulka Iftin Bank ku boorriyey in ay soo kordhiyaan adeegyo dheeraad ah oo dalka looga baahan yahay isla markaana ay xiriiro la yeeshaan Bangiyada Caalamiga ah, sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu maamulka Bangiga ku boorriyey in ay ilaashadaan kalsoonida shacabka.
Ugu dambayn Madaxweynuhu waxa uu kula dar-daarmay Qurba joogta reer Puntland meel walba oo ay joogaan in ay ku dhiirradaan in ay dalka maal-gashaadaan si waddankana loo horumariyo dhallinta shaqo la’aantu haysan ay shaqooyin ugu abuuraan.
Madaxweynaha ayaa kadib markii uu kasoo baxay munaasabadda xarig jarka Bangiga waxaa uu shacabkiisa kulan nasasho iyo qaxwayn ah kula qaatay xarunta cusub ee Hotel Jubba ee magaaalda Garoowe, halkaas oo uu kula sheekaystay dadkii ka qaxwaynayey goobta.
DHEGEYSO-Mid kmaid ah haweenka qardho oo buraanbur ku taageertay xulka Puntland.